कोरोना सङ्क्रमणसँगै अस्पतालमा बिरामी बढे:अबको दुई हप्ता चुनौतीपूर्ण – Main Batti
कोरोना सङ्क्रमणसँगै अस्पतालमा बिरामी बढे:अबको दुई हप्ता चुनौतीपूर्ण
प्रकाशित मिति : ३० पुष २०७८, शुक्रबार १७:१२
अस्पतालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि जटिल अवस्थाका बिरामी कम रहेका डाक्टरले बताएका छन् । भर्ना भएका धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता नदेखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. मनिषा रावलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ६० प्रतिशत बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक परेको छैन । सङ्क्रमितलाई अक्सिजन नचाहिए पनि अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट र तरल अक्सिजन प्लान्ट तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ ।
टेकुका निर्देशक डा. रावलका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका १२ मध्ये तीन जनालाई सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा अक्सिजन दिइ उपचार गरिएको छ । नौ जनाको हाइ डिपडेन्सी कक्ष एचडीयूमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालमा भर्ना हुने धेरैजसोमा घाँटीमा अप्ठ्यारो हुने, नाकबाट पानी बग्ने, शरीर दुख्ने, शरीर तातो हुने, रुघा लाग्नेजस्ता लक्षण देखिएका छन् ।
टेकु अस्पतालमा सय शय्यासहित २४ आईसीयू रहेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. रावलले सङ्क्रमित बढिरहेकाले अबको दुई हप्ता चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । यसैगरी बलम्बुको सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ अस्पतालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
अहिले अस्पतालमा ५५ सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका डा. प्रविन नेपालले भर्ना भएका धेरै बिरामीलाई अहिले अक्सिजन नचाहिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म भर्ना भएका धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको छैन । अस्पतालमा दैनिक २५० सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट र २० टन क्षमता भएको तरल अक्सिजन प्लान्ट रहेको छ । वीर अस्पतालमा पाँच सय शय्यासहित सय शय्याको आईसीयू रहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले आईसीयू दुई हजार सात सय ९७, भेन्टिलेटर एक हजार आठ, एचडीयू तीन हजार आठ सय ४६ रहेका छन् । यस्तै अक्सिजन सिलिन्डर १३ हजार नै सय ३९, अक्सिजन कन्सटेन्ट्रर ६ सय ९३ रहेका छन् ।-रासस